Mmeghari Yiri: Ọ bụrụ n’anyị jiri sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, anyị abụghị ndị na - apụ apụ? | Site na Linux
Free Software Movement na Linux na Hacker Movement
Ọtụtụ ekwuola iche iche, ebe a na Blog na Global Internet Ecosystem banyere Free Software Movement (SL) na Hacker Movement. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ndị amatachaghị akụkọ ihe mere eme nke mmeghari abụọ ahụ. Na ha na-enwekarị obi abụọ, ma ọ bụrụ na otu onye metụtara nke ọzọ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ha abụghị ma ọ bụ metụtara.
Ọbụna ajụjụ "Ọ bụrụ na anyị ejiri sọftụwia efu, anyị abụghị ndị omekome?" na isi ya na-abụkarị ihe a na-akwa emo (Memes and Jokes) site na nke ya ma n’èzí nye Obodo nke Movements. Ma gịnị bụ eziokwu banyere ajụjụ dị otú ahụ? Kedu njem mbụ butere? Ihe mbu emetuta ihe okike na / ma obu mmepe nke ozo? Ajuju ndi a na ndi ozo ka anyi g’eji gbalie iji nkowa di ala a di mfe banyere isiokwu a.
2 Teknụzụ-ndọrọ ndọrọ ọchịchị na / ma ọ bụ mmeghari teknụzụ
2.1 Ndị Hacker Movement
3 Mmekọrịta dị n'etiti Free Software Movement na Hacker Movement
N'oge ndị ọzọ na DesdeLinux Blog anyị emetụla aka na isiokwu ndị yiri ya ma ọ bụ metụtara otu ma ọ bụ echiche abụọ, ya bụ, Sọftụwia efu na ndị na-agba ọsọ. N'etiti ederede kachasị ọhụrụ anyị nwere ike ịkọ banyere m:
«Mmụta Hacking: Usoro ngwanrọ efu na usoro agụmakwụkwọ"na
«Crypto-Anarchism: Sọftụwia Ego na Ego Nkà na ụzụ, Ọdịnihu?".
Site Blogger «ChrisADR» isiokwu a na-akpọ: «Gịnị ka Hacker pụtara?".
Na maka ọtụtụ, mmekọrịta na mbido nke «Teknụzụ-ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Teknụzụ-mmegharị» nwere ike amaghi. Otú ọ dị, eziokwu bụ na ha nwere otu ebe ha si, na ha nwere otu akụkọ ihe mere eme na ebumnuche ndị yiri ya, ma site na nkà na ụzụ, nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke ọha na eze.
Otu akụkọ a na-akọkarị site na mmalite nke Teknụzụ Ozi na Nkwukọrịta Teknụzụ (ICT) ihe na-erughị 100 afọ gara aga., karịsịa site na mwepụta nke "Internet" na teknụzụ metụtara na echiche nke "Internet nke ihe".
Na ụfọdụ ebumnuche ndị a na-ahụkarị metụtara nzuzo na nchebe nke ndị mmadụ n'otu n'otu. Site kwa n’ike onye obula muta, kuzi ihe, meputa, kesaa, jiri ma gbanwee ihe nile (teknuzu ma obu na odighi) n’ime iru ha n’obodo taa. Ihe a niile n'ụzọ sara mbara mana ọ nwere mmetụta dị egwu, nke dị irè na nke ọhụụ, na ọnụ ọgụgụ kachasị ukwuu nke ndị mmadụ nwere ike inwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nke akụ na ụba na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na-enweghị nkwụsị na mpaghara, okpukperechi na ọdịbendị.
Site na ebumnuche ejiri mee ka ọgbọ ọhụrụ nke ụmụ amaala na mmegharị nke ụmụ amaala na-akwado ma ọ bụ nweta mgbanwe n'ime onwe ha, na obodo ha na gọọmentị. Nke ahụ na-ewepụta usoro ọhụụ ọhụụ ọhụụ na usoro nke gọọmentị, ịdị n'otu, mmepụta, agụmakwụkwọ, ọzụzụ, mmụta na okike, n'okpuru ụkpụrụ ndị a na-asọpụrụ ma kwanyere ùgwù: "Free, Open, Accessible and Safe."
Teknụzụ-ndọrọ ndọrọ ọchịchị na / ma ọ bụ mmeghari teknụzụ
Dika mmadu meputara na teknụzụ, o gabigala uzo di iche iche, na onodu ma obu ogo di iche, dabere na mpaghara uwa, ya bu, na mba ma obu mpaghara. Site na mgbanwe teknụzụ mmepụta ihe nke ikpeazụ na mgbanwe teknụzụ dijitalụ na nso nso a, ọtụtụ mgbanwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta ọha na eze emeela, nke n'aka nke ya agbanweela usoro akụ na ụba na nke ọdịbendị nke ndị mmadụ na / ma ọ bụ ọha mmadụ.
Ya mere, tupu, n'oge na mgbe oge ọ bụla dị mkpa nke mmadụ, dị iche iche bilitere ma ga-ebilite. mmegharị dabere na iji teknụzụ na ihe ọmụma nke oge ọ bụla. Mmeghari nke pụtara n’etiti ndị ọzọ, maka mmetụta ha na mmepe nke akụkọ ntolite nke mmadụ. Mana taa, mmegharị nke kacha ada bụ:
Ndị Hacker Movement
N'ịbụ onye a ghọtara n'ụzọ sara mbara ma dị irè na a "Hacker" bụ onye nwere nnabata ihe ọmụma, nka, teknụzụ ma ọ bụ teknụzụ nke ọma ma ọ bụ nke ọma, ma ọ bụ ọtụtụ n'ime ha n'otu oge, ma na-achọ ma na-ejikwa otu ma ọ bụ karịa otu site na omumu na omumu n’iru, ihu oma ya na ndi ozo, ya bu, otutu.
Site n'echiche a enwere ike ịpụta na "ndị na-agba ọsọ" na - enwekarị mgbagwoju anya na "Geniuses" nke oge ọ bụla, ya mere, ha dị adị kemgbe mmalite nke mmadụ n'onwe ya. Ikwe ma ọ bụ ịkwado mgbanwe na mgbanwe site na ọganihu teknụzụ dị n'oge ọ bụla.
Na obata na oge nke oge a nke ICT (Informatics / Computing) na karia Intanet na Intanet nke ihe, "Ndị omempụ" taa bụ ndị na-enweta site na ICT, mgbanwe ndị dị mkpa ma dị mkpa na ha.
Iji mezuo ya, mgbanwe na mpaghara ndị ọzọ dị mkpa dịka Mmụta, Ndọrọ Ndọrọ Ọchịchị ma ọ bụ Akụ na ụba, maka ma ọ bụ megide ụfọdụ ngalaba ma ọ bụ ọdịmma, nke na-emerụ ma ọ bụ nupụrụ isi, n'ụzọ ma ọ bụ ọzọ.
N'ịbụ onye a ghọtara n'ụzọ sara mbara na nke bara uru dị ka Software na-akwụghị ụgwọ na ngwanrọ niile nke Software mepụtara n'otu n'otu ma ọ bụ n'otu n'otu n'okpuru ụkpụrụ ụfọdụ dị mkpa ma ọ bụ nnwere onwe anọ (4) bụ:
Jiri: Nnwere onwe iji ngwanrọ iji nwee ike iji ya kpamkpam n'agbanyeghị nzube ya.
Ọmụmụ: Nnwere onwe ịmụ otú e si mee software iji hụ otú o si arụ ọrụ.
Kekọrịta: Inwere iji kesaa ngwanrọ ahụ iji hụ na anyị nwere ike inyere ndị ọzọ aka inweta ya.
Iji ka mma: Nnwere onwe iji gbanwee ihe ndị dị na ya, iji melite ha ma mee ka ha kwekọọ na mkpa dị iche iche.
N'iburu nke a n'uche, enwere ike ịchọta mmalite nke SL Movement n'oge oge nyocha sayensị bịara bụrụ ihe nkịtị gburugburu 50s / 60s. Ebee ka ọtụtụ sọftụwia ahụ mepụtara site na otu ndị sayensị kọmputa, agụmakwụkwọ na otu ndị nyocha.
Ndị a niile rụkọtara ọrụ ọnụ na ibe ha. Site n'enyemaka nke ndị ọrụ dị iche iche, ha kesara ngwaahịa ndị ikpeazụ kwuru ka ha nwee ike gbanwee iji nweta ndokwa na / ma ọ bụ ndozi dị mkpa n'ọdịnihu.
Ma ọ bụ gburugburu 80s, mgbe ọ na-ewe ọdịdị na visibiliti, nke dị ugbu a na «Techno-social» Movement maka Free Software na GNU / Linux. Nke a bụ n'ihi ntoputa nke otu ngagharị na otu obodo dị njikere igbo mkpa ọ dị ịrụ ọrụ n'efu na n'efu. Iji luso ihe di egwu na otutu mmepe nke Software nke Onwe.
Laghachi n'oge mgbe mmepe nke kọmputa na ngwanrọ mbụ bụ ihe na-emekọ ihe ọnụ na agụmakwụkwọ. Ruo taa, mgbe SL na GNU / Linux Movement nwere ọnọdụ nsọpụrụ na akụkọ ihe mere eme na teknụzụ nke ọha mmadụ taa. Ebe ọ bụ na sọftụwia niile mepụtara, Sọftụwia Na-akwụghị ụgwọ na akụkụ buru ibu nke ugbu a bụ Sọftụwia Mmepe Software dabere na ụkpụrụ ya (nnwere onwe).
Onyinye a bụ ngosipụta teknụzụ-ọdịbendị bara uru, mmadụ / mkpokọta (nwa amaala) na ọbụlagodi azụmahịa (azụmahịa) dị mkpa n'ụwa niile, tinyere nnukwu mkpa na mba ụfọdụ karịa na mba ndị ọzọ. Mmegharị ndị ọzọ adịchaghị mkpa na otu akara nwere nnukwu onyinye n'akụkụ a, na-abụkarị ndị Cyberpunks Movement na Cryptoanarchist Movement.
Mmekọrịta dị n'etiti Free Software Movement na Hacker Movement
Na nkenke okwu anyị nwere ike ikwu na mmekọrịta dị karịa pụtara ìhè na symbiotic. Ebe ọ bụ na Free Software Movement ebilite ndammana si Hacker Movement na 50s / 60s. Ọ na-adịgide ruo taa dị ka nzaghachi sitere na Teknụzụ Society.
Azịza agaghị ahapụ site na azụmaahịa, nkeonwe na nke mechiri emechi (SCPC), na-achịkwa ma ọ bụ na-emegharị kpamkpam site na ihe ndị dị elu na mpaghara teknụzụ, akụ na ụba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
N'aka nke ya, Free Software Movement na-enye Hacker Movement ụzọ ziri ezi nke teknụzụ Software. Thatzọ nke na-enye ha ohere ịrụ ọrụ nke iru na ịnọgide na-enwe ọgbara ọhụrụ na nnwere onwe teknụzụ na oke akụkụ nke Humanmụ mmadụ. N'etinyeghị ikike gị ichebe onwe gị, nchedo na nnwere onwe na mkpokọta nnwere onwe.
Oge a na nnwere onwe teknụzụ nke na-abụkarị naanị n'ihi nnukwu ụgwọ, mmachi na ọghọm nke iji SCPC. Karịsịa n'obodo ndị mba ha anaghị enye ego ha zuru oke ma ọ bụ akụnụba ha iji nweta mmelite ha.
Ma ọ bụ na mba ebe gọọmentị ma ọ bụ ngalaba akụ na ụba na-anwa ịkpụzi ma ọ bụ chịkwaa ọtụtụ ụmụ amaala site na iji ụfọdụ SCPC. Mmemme ma ọ bụ nyiwe nke na-anapụta, nata ma / ma ọ bụ jiri data anyị data ma ọ bụ na-enweghị ikike, na-awakpo nzuzo anyị ma ọ bụ na-emegharị echiche na eziokwu anyị.
Mgbe ị gụsịrị akwụkwọ a na akwụkwọ ndị akwadoro n'ime Blog, anyị kwadoro gaa n'ihu na-agụ ndị na-esonụ «Akwụkwọ dijitalụ metụtara isiokwu nke Free Software Movement na Hacker Movement»Na PDF.
Anyị nwere olile anya na ihe niile a ga - enyere gị aka ịghọta nke ọma mmekọrịta dị n’etiti mmegharị, ya bụ, n’etiti Free Software Movement na Hacker Movement. Na na ọ bụ ihe na-amasị ma na-enye mmadụ ọgaranya nke ukwuu n'ọtụtụ isiokwu. Onyinye ọ bụla, obi abụọ ma ọ bụ ajụjụ ọ bụla bilitere, egbula oge ịza ajụjụ banyere mbipụta a.
Cheta: «Ọ bụrụ na ị kwenyere na / ma ọ bụ jiri Sọftụwia Na-adịghị, ị bụrịrị onye Hacker, gịnị kpatara na ị na-enye onyinye na teknụzụ naanị na mgba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta ọha na eze.»- Ruo mgbe ọzọ isiokwu!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Mmeghari Yiri: Ọ bụrụ n’anyị jiri sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, anyị abụghị ndị na - egwu egwu?
"Ọ bụrụ na ị mepụta ma / ma ọ bụ jiri Sọftụwia Na - akwụghị ụgwọ, ị bụlarị ndị Hacker", mgbe ahụ Microsoft ga - abụkwa Hacker, n'ihi na ọ na - atụnye ụtụ na sọftụwia n'efu ma ọ bụ? Echere m, amaghị m, ma ọ bụ na m ezighi ezi? xD
Otu a priori nwere ike ikwu: "N'ihe ụdị arụmụka a enweghị arụmụka ga - ekwe omume" mana Microsoft dịka "Comlọ Ọrụ Azụmaahịa Globalwa" na-akwụ ụgwọ ọtụtụ "Hacker" bụ onye nwe "Free Software Arts" maka ya ime ihe ha kacha mma "Nweta ego maka ndị nwe ya». N'ihi ya, ha abụghị Hacktù Hacker, ikekwe FSF, Mozilla ma ọ bụ Red Hat ma ọ bụ Suse, mana Microsoft.
Linux Foundation kwalitere ELISA oru ngo maka sistemụ a pụrụ ịtụkwasị obi nke ukwuu